အတိုးပေးမယ် ---------------- အစကတော့ အိမ်က မာတာမိခင်အတွက် ပဲလုပ်နေတာ လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ Multi အတိ…
အစကတော့ အိမ်က မာတာမိခင်အတွက် ပဲလုပ်နေတာ လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ Multi အတိုးပေးစားတဲ့သူတွေ(နေ့ပြန်တိုးသမားတွေမပါဘူးပေါ့) အတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်။( But အဲ Feature အတွက် ထပ်စဥ်းစားရဦးမယ်။ မရတော့တဲ့အဆုံး Multi apps ထုပ်​လိုက်မယ်။ မရမက ကြံဖန်တက်ရတာပေါ့: 3)
လုပ်ရင်းနဲ့မှ Business idea တွေထွက်လာတာလဲရှိတယ်။( တချို့ကတော့ပြောမှာပဲ ပေါတောတောနဲ့ပေါ့။ ဒီ Apps ကနေ ဘယ်လိုမျိုး Bussiness idea ထွက်မှာလဲပေါ့။) ဟုတ်လောက်မှာပါ။ ကျနော်စရေးတုန်းကလဲ အဲလောက်ထိ မတွေးထားဘူး။ အိမ်က အမေအတွက်ပဲဆိုပြီးရေး​ဖြစ်တာ။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ရင်းနဲ့ Multi အတိုးပေးစားတဲ့သူတွေ သုံးလို့ရအောင်လဲ လုပ်ချင်တော့ မရမက ဖန်တီးရတယ်။
အဲမှာ Multi အတိုးပေးစားတဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုမျိုး စျေးကွက်ရှာမလဲ မေးစရာရှိလာတယ်။ ကျနော်စဥ်းစားထားတာကတော့ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ အစမ်း ၁ လပေးသုံးမယ်။ အဲ ၁ လမှာ Client user ၂ ယောက်ပဲ ပေးသုံးမယ်။ (Client user ဆိုလို့ အတိုးပေးစားတဲ့ ပိုင်ရှင် နှစ်ယောက်ကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ )ကိုယ်နဲ့ သိတဲ့ ကိုပြောလို့ရတဲ့ အတိုးပေးစားတဲ့သူတွေကို စမ်းသုံးခိုင်းမယ်။ အဲမှာ သူတို့က အတိုးယူတဲ့ user ၂ ယောက်ကို အစမ်းအနေနဲ့ မှတ်ထားလို့ရမယ်။ ၁ လပြည့်သွားရင်တော့ ဟဲဟဲ သိတယ်မှတ်လား ဝယ်သုံးရတော့မယ်လေ။ ၁ လတခါ ဒါမှမဟုတ် ၆ လတခါ ငွေပေးချေရမယ်ပေါ့။
အဲမှာလဲ ဘယ်လောက်ပဲကောက်မှာဆိုတော့ ၁ လကို Client (အတိုးယူတဲ့သူ)အရေတွက် ၁၀ ယောက်ကို ၅၀၀၀ နှုန်းပေါ့ ၂၅ ယောက်ဆိုရင် ၁၀၀၀၀ နှုန်းပေါ့။ အဲလိုမျိုး ​Bussiness idea တော့ရှိထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ကတော့ပြောမှာပဲ အဲလိုဟာမျိုး ဘယ်မှာမှ မသုံးဖူးဘူးလို့။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။
အဲအတွက်လဲ မပူပါဘူး ကျနော်နေနေတာက တောမှာလေ သိတယ်မှတ်လား တောမှာဆိုရင် အတိုးပေးစားသူတွေက ၁၀၀ မှာ ၅ ယောက် ၁၀ ယောက်​​​ေလာက်ရှိတယ်။ အဲလောက်နဲ့လဲ အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲအတွက် စကားပြောရမှာတော့အာပေါက်မှာ။
ဒါဆိုရင် ဒီ Apps မှာ ဘယ်လို Feature တွေပါလဲ။
၁. အတိုးလာယူတဲ့သူရဲ့ Data ကို Computerized မှတ်ထားနိုင်တယ်။
၂. အရင်တုန်းက စာအုပ်နဲ့မှတ်လို့ အတိုးလာယူတဲ့သူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြန်ရှာပြီး ဆက်သွယ်ရတာမျိုးတွေ အလုပ်ရှုပ်သက်သာသွားမယ်။
၃. Filter အနေနဲ့ဆို ရင် Filter ၈ မျိုးထည့်ပေးထားတယ်။
၁. ၂ ရက် ခ ပေးဖို့ကျန်တဲ့သူတွေကိုရှာလို့ရမယ်။
‎၂. ၃ ရက်ခ ပေးဖို့ကျန်တဲ့သူတွေကို ရှာလို့ရမယ်။
‎၃. ကျေဖို့ ၂ ရက်ပဲလိုတော့သူတွေကိုရှာလို့ရတယ်။
‎၄. ကျေဖို့ ၃ ရက်ပဲလိုတော့သူတွေကိုရှာလို့ရတယ်။
‎၅. ကျေဖို့ ၄ ရက်ပဲလိုတော့သူတွေကိုရှာလို့ရတယ်။
‎၆. ကျေဖို့ ၅ ရက်ပဲလိုတော့သူတွေကိုရှာလို့ရတယ်။
‎၇. ကျေဖို့ ၆ ရက်ပဲလိုတော့သူတွေကိုရှာလို့ရတယ်။
၄. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပိုက်ဆံကိစ္စကြောင့် စကားမများရအောင် ​အတိုးပေးပြီဆိုတာနဲ့ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန် မှာ ပေးလဲ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာနဲ့ပေးလဲဆိုတာကိုပါ Note အနေနဲ့ ပြန်မှတ်ထားပြီး ကြည့်လို့ရမယ်။
၅. ကိုယ့်ဆီမှာ အတိုးလာယူတဲ့သူကိုပါ Apps ကိုပေးသုံးပြီး သူတို့အကောင့်လေး ဝင်လိုက်တာနဲ့ သူတို့ ယူထားတဲ့ အသွင်းတွေကိုမြင်ရပြီး ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်လိုတွေပေးထားလဲ ကျေဖို့ဘယ်နှစ်ရက်ပဲလိုတော့လဲဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။
၆. စာချုပ်မှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်မှတ်ထိုးမှ အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်သလိုပဲ အတိုးပေးရာမှာလဲ အတိုးဖိုးပေးတဲ့သူရဲ့အကောင့်ရှိမှ အတိုးပေးလို့ရတာမျိုး။ အကယ်၍ ဒီနေ့အတိုးဖိုးမပေးဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင် Admin ကသူ့သဘောအတိုင်း အတိုးမပေးပါဆိုပြီး မှတ်ချက်ရေးလို့မရပဲ အတိုးဖို့ပေးရမဲ့သူရဲ့ သဘောတူညီချက်ပါမှ မှတ်ချက်ရေးလို့ရတဲ့ Feature မျိုးတွေပါတယ်။
အဲလောက် Feature စုံနေမှတော့ တစ်လမှ ၅၀၀၀ နဲ့စရောင်းတာ အချိုသာဆုံးစျေးနော်။
အဲအတွက် လိုချင်တဲ့ သူများ Contact လုပ်ထားလို့ရတယ်။ Apps တော့ release မလုပ်ပါဘူး။ အခုချိန်ထိတော့ Multi အတိုးပေးတဲ့သူတွေအတွက်လုပ်နေပါတယ်။ မဝယ်ဘူးဆိုရင်တောင် အစမ်းသုံးကြည့်လို့ရအောင် Contact လုပ်လို့ရတယ်နော်။
ဖုန်း 09973419006 (ကျော်ထွဋ်)
Never missastory from Kyaw Htut, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Kyaw Htut